Veliranon’ny filoham-pirenena :: Vonona hanampy ny governemanta ireo mpiara-miombon’antoka • AoRaha
Veliranon’ny filoham-pirenena Vonona hanampy ny governemanta ireo mpiara-miombon’antoka
« Mbola matoky ny fanjakana malagasy ireo mpamatsy vola ». Araka ny namehezan’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, ny fihaonan’ny governemanta sy ireo solontenan’ny firenena mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara, teny Mahazoarivo, omaly.
Nohamafisin’ny Lehiben’ ny governemanta fa: “mbola vonona hanampy ny fitondram-panjakana amin’ny fampiroboroboana ny toekarena eto amintsika izy ireo”.
“Hampifanarahana amin’ny velirano sy ny vinam-pampandrosoana napetraky ny Filohan’ny Repoblika izany. Efa voarafitra ao anatin’ ny fandaharam-pampandrosoana amin’ireo sehatra rehetra misy eto amintsika koa”, hoy hatrany ny Praimi­nisitra.
Na izany aza, nambaran’ ity farany fa misy ihany ireo sehatra mbola ilàna fifampi­resahana, toy ny drafi-pam­pi­anarana ampiharina eto amintsika. Eo ihany koa ny momba ny raharaham-pifi­dianana izay tokony hovatsian’ ireo firenena vahiny vola.
Serasera sy asa an-gazety :: Nankatoavin’ny governemanta tsy nisy fanitsiana ilay volavolan-dalàna
Rantsamangaika isaky ny minisitera :: Hofoanana ireo sampan-draharaha mandany vola be fotsiny